9 Midab Powder Highlight Blush Palette & Kondens Contour, Side Face Contouring Powder Makeup Long-Brightening Makeup Xitaa Maqaarka Tone Goynta Dhabannada.
Midka koowaadDib-u-Celin Wanaagsan: Adoo isticmaalaya palette-ka midabada lixda midab leh ee garka, dhabannada, iyo sanka, waxaad si fudud u abuuri kartaa muuqaal muuqaal ah, kaa caawinaya inaad wax ka beddesho cilladaha wajiga oo aad ku darto wejiga wajiga, oo aad ku darto bilicsanaanta muuqaalkaaga qurxinta ee kala duwan..
Dareenka-fudud ee isku-dhafka ah iyo muddada-dheer soconaya ayaa si khafiif ah loogu boorin karaa tufaaxyada dhabannada si loogu soo shubo qulqulatooyin khafiif ah, ama loo dhiso si loo gaaro riwaayad aad u xiiso badan oo midab leh.
Labada hore:Sida loo istcimaalo: Adoo isticmaalaya buraashka wejiga la jeexjeexay, ku nadiifi boomaatada dhabannada, dhinacyada sanka iyo garka si aad u qaabeysid dusha sare. Guduud ku mari tufaaxada dhabannada, iskuna qas kor iyo xagga dhegaha iftiin dabiici ah.
Abuur muuqaal-dabiici ah oo leh taabasho satin dhabannada Waxay bixisaa noocyo kala duwan oo casaan ah oo peachy ah muuqaal muuqaal ah
Ku dar boon midab leh oo dhabannada leh
Ku habboon isticmaalka maalinlaha ah, dhacdooyinka gaarka ah ama munaasabadaha iwm dhammaan qurxinta. Sida xirfadlaha, qurxinta arooska, qurxinta xafladda ama qurxinta caadiga ah iwm.
JOYO waxay leedahay waxaad ubaahan tahay si aad u abuurto aasaas kasta oo muuqaal ah, hooska indhaha, burushka qurxinta, qarinta iyo iftiimiyayaal si loo abuuro nolol qurux badan.
Saddexda hore:Tqurxinta ransparent, light and silky, casri ah oo casri ah, ka ciyaar door aad u fiican isbadalka qurxinta, waa xulasho lama huraan u ah reer Yurub iyo Mareykan jecel quruxda, si loo abuuro “nidaam qaangaar ah oo galmo leh” (qurux aan naxariis lahayn).
Afarta hore:Baakadaha - sanduuq kartoon ah oo qaawan oo leh 9 midab oo guduud ah, cabbir kasta oo cabbirkiisu waa 3.65 cm * 3.65 cm. Tayo sare, fududahay in la isticmaalo. Aad ugu habboon isticmaalka xirfadeed ama isticmaalka maalinlaha ah.
Riyoonaya - jilicsan, jilicsan oo si fiican loo isku daray. Karbaash anti iyo wasakhda sunta. Waxay aad ugu habboon tahay farshaxan-yahannada qurxinta iyo qof kasta oo doonaya inuu isku dayo midabbo kala duwan oo ah budo la isku qurxiyo halkii aad keligaa lacag ku bixin lahayd si aad u iibsato aasaaska.
Astaamaha - u keen dhalaal dabiici ah oo caafimaad qaba midab kasta oo maqaar ah, kaas oo kaligiis la gashan karo ama lakulmayo si loo kordhiyo qoto dheer iyo xoog. Bixi midabbo hufan, dabiici ah. Isticmaal midab hufan si aad isaga ilaaliso dareenka culus.
Midab - taxane xirfadeed qurxiyo, 9 nooc oo midabbo midab leh, ayaa kaa sii dayn doona maqaarka madow. Qurxinta midabkeedu yahay 9 midab oo ah Blush Powder ayaa maqaarka ka dhigaysa mid jilicsan oo cusboonaysiin leh, dabiici ah oo caafimaad dhalaalaya.
Ku habboon - ku habboon Xisbiga qurxinta / qurxinta caadiga ah / Qurxinta arooska, iwm. Vodisa Face blush ayaa kaa caawin doonta inaad soo jiidato dad badan xafladaha ama munaasabadaha kale. Midabyo kala duwan oo aad ka xulan karto.
Hore: Qurxinta indhaha-BD15-DW
Xiga: Waji qurxiyo-BD-CH
JOYO © Dhammaan xuquuq dhowran Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Lipstick yar, Matte Eyeshadow Palette, Qurxinta Indhaha Dahabka ah, Eyeshadow kareemka ugu fiican, Burushka ugu Fiican, Liimiga Shimmer, Dhammaan Alaabooyinka